मनै लोभ्याउने खप्तड (फोटो फिचर सहित) - Mero Mechinagar
मनै लोभ्याउने खप्तड (फोटो फिचर सहित)
भित्र धर्म / संस्कृति, पर्यटन / भ्रमण, मुख्य समाचार, राष्ट्रिय, समाज, सुदूरपश्चिम प्रदेश
२५ साउन, खप्तड: धर्तीको स्वर्ग (भू–स्वर्ग)का रुपमा चिनिने सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडमा अहिले अनेक फूल फुलेका छन् । डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङ्ग जिल्लाको सँगम स्थलको रुपमा रहेको खप्तड क्षेत्रमा वर्षायाममा फुल्ने फूलले ढकमक्क सिंगारिएको छ । फराकीला पाटनमा फुलेका बिभिन्न रंगका फूलहरुले खप्तड क्षेत्र बेहुली झै सिंगारिएको छ ।
खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल २२५ बर्ग कि.मी. रहेको छ । समुद्र सतहबाट तीन हजार ५ सय मिटर सम्म उचाईमा रहेको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पाँच सय ६७ थरिका वनस्पतीहरु पाइन्छन । खप्तडलाइ २२ पाटन, ५२ झोती (थुम्का)को संगम स्थलका रुपमा पनि लिने गरिन्छ ।
खप्तड पुग्न यात्रा केही कठिन भए पनि खप्तडको सुन्दरताले बाटोको थकान मेटाउछ । हिउँदमा हिउँले पुरिने खप्तड बर्षायाममा सयौं प्रकारका फुलै फूलहरुको बगैचा झै देखिन्छ । बिभिन्न किसिमका चराहरूको चिरबिरले वातावरणलाई अरू मनमोहक बनाएको हुन्छ ।
कसरी जाने खप्तड ?
खप्तड पुग्न अछाम, बझाङ्ग,बाजुर र डोटीबाट जान सकिन्छ । खप्तड पुग्ने धेरै बाटाहरू भए पनि बढी चलनचल्तीमा डोटीको बाटो रहेको छ । काठमाडौंबाट हवाईजहाज वा बसबाट पनि धनगढी पुग्न सकिन्छ । धनगढीदेखि डोटी जिल्लाको सदरमुकाम सिलगढीसम्म आठ घन्टा बस चढेपछि डोटीकै झिग्राना सम्म २ घण्टाको जिपको यात्रा गर्नु पर्छ । सिलगढीबाट हिँडेकै दिनमा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गर्न सकिन्छ । निकुन्ज प्रवेशसँगै अप्ठ्यारो तथा निकै ठाडो उकालो बाटो आउँछ । दोस्रो दिन बिचपानीबाट हिँडेपछि ठुल्ठूला चट्टान र घना जंगलको बाटो हिड्नु पर्छ । बाटोमा फुलेका रंगीचंगी फूलहरूको सौन्दर्यको आनन्द लिँदै साँझ त्रिवेणी मन्दिर पुगिन्छ । खप्तड जानुभन्दा अघि पाल, स्लिपिङ व्याग, खाना पकाउने सामानसँगै लिएर जानु बेस हुन्छ । साथै, ड्राइफुड पनि बोक्नु पर्छ । यहाँ बास बस्नका लागी गेष्टहाउस भए पनि तिनको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
गोरखपत्र अनलाइबाट डिलबहादुर सिंहको आलेख
एसईई पास गरेकाहरुका लागि नेपाल टेलिकमको आकर्षक अफर